Iqhaza lezinkulisa lisesemqoka emfundweni yezingane | Bayede News
Home/ Izindaba/ Injolozela/Iqhaza lezinkulisa lisesemqoka emfundweni yezingane
IZINKULISA yizikhungo eziyithemba labazali ngempilo yezingane zabo ngoba yilapho zinakekelwa khona zicathuliswe nangokuningi okuzilekelela uma seziqala imfundo emazingeni aphansi. Esikhathini samanje izinkulisa sezithe chithi saka ngenxa yokwanda kwezingane nokushintsha kwesimo sempilo njengoba omama sebesebenza kanti phambili kwakuyibo ababehlala emakhaya bekhulisa izingane.
Okunye okwandisa izinkulisa ukuthi umsebenzi wokunakekelwa kwezingane usuphenduke ibhizinisi. Izingane zishiywa ezinkulisa ngabazali kusempondozankomo bazilande seliyozilahla konina.
Ngaphambi kokuqala inkulisa kumele ube nendawo ephephile nsibalo esithile sezingane futhi ibhaliswe ngokusemthethweni ngaphansi koMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi. Inkulisa kumele ihlolwe njalo emuva kwesikhathi esithile ukuthi isesimweni esilindelekile yini, kodwa sekuvamisile ukuqubuka koqhibukhowe bezinkulisa kuzona zonke izindawo.
Kuningi okuhle okwenziwa izinkulisa kodwa isigameko sakamuva esisabalele ezinkundleni zokuxhumana sevidiyo okuvela kuyo uthisha wasenkulisa ebhaxabula ngoswazi ezinqeni ingane eneminyaka engaphansi kwemine eyiphoqa nokuthi ikorobhe phansi isule nezihlalo sisuse konke okuhle okwenziwa izinkulisa neqhaza lazo ekukhuliseni izingane ngendlela.
Lesi sigameko sinyuse izinhlonzi kubazali nakuNgqongqoshe Womnyango Wezemfundo Eyisisekelo kuzwelonke uNkk u-Angie Motshekga ngeqhaza lezinkulisa nomthetho ezisebenza ngaphansi kwawo.
Lo thisha wasenkulisa iCarltonville eGoli waboshwa ngalesi sehlakalo wavela enkantolo zingama-28 kuNdasa wadedelwa ngebheyili.
Lesi sigameko sinyakazise ngisho nePhalamende elifuna lo thisha angaphinde avunyelwe ukusebenza nezingane. USihlalo Wekomidi loMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi uNks uZoleka Capa uthe igama lalo thisha kumele lifakwe ohlwini iNational Child Protection Register ukuze angaphinde nangengozi akwazi ukusebenza nezingane.
Lo luhlu luqukethe yonke imininingwane engokuhlukunyezwa kwezingane ngezindlela ezehlukene namagama alabo abalahlwa amacala nezigwebo abanikwa zona.
“Sinxusa ukuba uHulumeni usebenzisane nazo zonke izinhlaka zezomthetho ukuhlola zonke izikhungo ezinakekela izingane ngokuthi ziyawulandela yini umthetho futhi nokunakekelwa kwezingane kubekwa eqhulwini,” kusho uNks uCapa.
Ngenxa yokudlanga kwalesi sihlava, uNks uCapa unxusa nomphakathi ukuthi ungafeli ngaphakathi uma kukhona okusolayo. Emuva kwalesi sigameko umbuzo oqubukile ngothi ziphephe kanjani izingane ezinkulisa nokuthi uMnyango Wezemfundo Eyisisekelo Nowokuthuthukiswa Komphakathi uyakulandela yini ukuthi zonke izinkulisa ezikhona zibhalisiwe ngokusemthethweni nokuthi othisha nabanakekela izingane baqeqesheke ngokwanele yini.
UNkk uJanine Wasserfal onenkulisa eKapa osekuphele iminyaka eli-18 esebenza ngezingane uthi lona akuwona umsebenzi wabantu abangenalo uthando lwezingane ngoba udinga isineke nokuzinikela futhi uma uzowenza ngoba ubheke inzuzo usuke ungene emkhakheni ongakufanele.
“Enkulisa yami ngithatha izingane eziphakathi kweminyaka emithathu kuya kwemine ngenxa yokuthi izingane sizinika isikhathi sonke, futhi sifuna nokwazi nenhlalakahle yazo emakhaya,” kusho uNkk uWasserfal. Uthi ngaphambi kokuqala inkulisa kumele ube nendawo esemthethweni ephasiswe umkhandlu okuwo ngokusizwa nayiminyango kaHulumeni. “Uma zonke izinto zakho ziqondile kulula ukusizakala eMnyangweni Wezokuthuthukiswa Komphakathi ngoba yiwona izinkulisa ezingena ngaphansi kwawo.”
Uthi othisha abasebenza ezinkulisa kumele babe no level 1 wezifundo zoqeqesho ze-Early Childhood Development kanti akhona amakolishi okuqeqesha anazo lezi zifundo. Usigxekile isenzo sasenkulisa yaseCarltonville ethi izigameko ezinjena zivamisile ezinkulisa ezingoqhibukhowe futhi ezingabhalisiwe.
UNkk uThembeni Mhlongo onguMqondisi Jikelele eMnyangweni Wezokuthuthukiswa Komphakathi esifundazweni iGauteng uthi izinkulisa kumele zibhalise zaziwe ngoba zisebenza ngabantu abamqoka esizweni okuyizingane. Uthi uma ufaka isicelo senkulisa kumele uzibophezele ngokuthi uzoyilandela yonke imigomo ebekiwe.
Eqhuba uNkk uMhlongo uthe benguMnyango bayakuqikelela ukuthi izinkulisa zibhalisile kodwa bathembela kakhulu ezinhlanganweni ezisebenzisana nazo izinkulisa futhi nothisha abaqashwa kuzo baqeqeshwe ngendlela futhi banazo nezitifiketi.
“Sisebenzisana kakhulu noMnyango kodwa esihlale sikugcizelela ukuthi kusemahlombe ezinkulisa nezikhungo ze-Early Childhood Development Centre ukwenza isiqiniseko sokuthi bonke othisha banazo izitifiketi ezidingakalayo futhi ezisemthethweni.
Uthi ngokomthetho obhekele ukuvikelwa kwezingane iChildren’s Act umuntu ohlukumeze izingane noma ngabe ingayiphi indlela akabe esavunyelwa ukuba aphinde asebenzisane nazo.
“Siyasebenzisana kakhulu nabomthetho ezimweni lapho kusuke kuhlukunyezwe khona izingane ukwenza isiqiniseko sokuthi labo abathintekayo bayaboshwa futhi abalitholi nethuba lokuphinde bahlangane nezingane”.
Khona manjalo izolo kuvele izindaba zokuthi inkulisa eseCarletonville isivaliwe emuva kwalesi sigameko.
Ukuvalwa kwale nkulisa kubuye kwagqugquzelwa kakhulu nanguMphathiswa Wezokuthuthukiswa Komphakathi esifundazweni iGauteng uNkk uNandi Mayathula-Khoza okwathi ngesikhathi eyihambele emuva kwesigameko wathola izinto eziningi ezazingahambi kahle waphakamisa ukuthi ivalwe.
Ngokusho koMphathiswa le nkulisa ayinaso isitifiketi sokusebenza ngokugcwele futhi ngokomthetho kwakumele engabe ayisasebenzi ngoba isitifiketi sayo sasigcina ngowezi-2016.
Izolo bese kukhala ingidi esangweni lenkulisa nabasebenzi bengasabonwa.
Abazali bezingane ebezifunda lapha bathi emuva kokusabalala kwevidiyo kubuye izinto eziningi abasola ukuthi bezenzeka ezinganeni zabo kodwa benganaki ngoba akukho obekukhombisa futhi zingekho nezimpawu zokuthi ziyahlukunyezwa.
UNkk u-Olga Mabaso onenkulisa eManzimtoti uthi okwenzekile kubahlukumeze kakhulu ngoba ekugcineni baboshwa ngabhandelinye kanti kusekhona okuhle okwenziwa yizinkulisa ekusizeni abazali ukukhulisa izingane.
“Lesi sigameko kumele sibe yisifundo ngokuthi abantu esibaqashayo sibazi kahle nokuthi siyawulandela umsebenzi wabo zikhathi zonke,” kuphetha uNkk uMabaso.
Isicelo sokunxeshezelwa sikhokhwa uma sesibhekisisiwe